Febroary 4, 2021
Topimaso an'ny Palmitoylethanolamide (PEA) Misy tatitra iray fa nankatoavin'ny Fitantanana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina ny fangatahana fitsapana ara-pitsaboana hitsaboana COVID-19 amin'ny alàlan'ny fampiasana fanafody syntetika izay maka tahaka ny asan'ny molekiola iray hita ao amin'ny marijuana. Ny zava-mahadomelina sentetika, antsoina hoe palmitoylethanolamide ultramicronized (micro PEA), dia inoana ho toy ny anti-inflammatoire. Palmitoylethanolamide (PEA) dia "a voajanahary ...
Vonona hamily ny fahanterana ve ianao? Eny, ny fanafody manohitra fahanterana dia tsy isalasalana fa ny safidy azo antoka indrindra amin'ny famadihana ny famantaranandro biolojika. Topazo maso ireo lafiny mitsikera ny Nicotinamide Mononucleotide (NMN), ny anjara asany amin'ny fahanterana, ary ny fomba hahazoana ilay fitsaboana. Phcoker dia mpanamboatra matihanina hamokatra vovo-tany Nicotinamide mononucleotide (NMN) mandefa fanontaniana haingana: Mifandray aminay Fampidirana mitombo o ...
Phcoker dia mpanamboatra matihanina amin'ny magnesium L-threonate miaraka amin'ny rafitra famokarana feno izay afaka miantoka ny famatsiana betsaka amin'ny vovoka magnesium L-threonate. Nahoana isika no mila Magnesium? Alohan'ny handinihantsika ny fanampim-panampiana nootropic Magnesium L-Threonate, dia mety mila mahatakatra ny teo alohany ianao. Magnesium dia micronutrient manan-danja, izay mandray anjara mavitrika amin'ny vatana maro ...
Fanampiny Galantamine Hydrobromide: Zava-mahadomelina tsara ho an'ny aretina Alzheimer ve?
Oktobra 26, 2020
Galantamine Hydrobromide topimaso Galantamine hydrobromide dia fanafody famoahana fanafody ampiasaina amin'ny fitsaboana aretina amin'ny aretin'i Alzheimer. Galantamine dia nalaina avy tamin'ny zavamaniry Galantus spp. Ny fanampiana galantamine kosa dia alkaloid tertiary izay mifangaro simika. Na dia tsy takatra tsara aza ny antony mahatonga ny aretin'i Alzheimer, dia fantatra fa ny olona mijaly amin'ny Alzheimer dia ...
Nootropics PRL-8-53: Manatsara ny fahatsiarovan-tena sy ny fahaizana mianatra ve izy io?
Topi-maso PRL-8-53 Ny fihenan'ny PRL-8-53 ho toy ny zava-mahadomelina psychoactive dia miverina tany am-piandohan'ny taona 1970. Nikolaus Hansl, mpampianatra ao amin'ny Oniversite Creighton, dia sendra nahita ilay nootropic raha niasa tamina esters asidra amino benzoika metaet. Hatramin'ny nanombohany, ity famenon-tsakafo ity dia nandalo fandalinana preclinical tokana sy fitsapana olombelona. Ny fikarohana klinika no porofo farany milaza fa PRL-8-53 amin'ny fandalinana ...
Cycloastragenol Overview Cycloastragenol (CAG) fantatra ihany koa amin'ny hoe T-65 dia triterpenoid tetracyclic voajanahary azo avy amin'ny zavamaniry Astragalus membranaceus. Hita voalohany izany raha ny tomban'ny Astragalus membranaceus dia nohamarinina noho ireo akora mavitrika misy fananana manohitra fahanterana. Cycloastragenol koa dia azo alaina amin'ny Astragaloside IV amin'ny alàlan'ny hetsika hydrolysis. Astragaloside IV no mpandray anjara mavitrika ...
NAD + Mpialoha lalana amin'ny fahanterana: Ny anjara asan'ny (NR) Nicotinamide Riboside Chloride tena zava-misy amin'ny fanoherana ny fahanterana
Nicotinamide riboside (NR) sy nikotinamide riboside (Chloride) Nicotinamide riboside (NR) chloride dia endrika kôlômbômanina amin'ny ribotide nicotinamide (NR). 1.Inona ny atao hoe Nicotinamide Riboside (NR)? Ny NR dia endrika vitamina B3 na niacin. Ny fitambarana dia hita tamin'ny taona 1940 ho fisondrotan'i H. influenza. Tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-21, fanadihadiana marobe no manaporofo fa i NR dia mpialoha lalana an'ny NAD +. I ...
Traikefa amin'ny oxiracetam: Manao ahoana ny fahatsapako ny vovoka oxiracetam?
Septambra 14, 2020
Inona ny atao hoe Oxiracetam? Oxiracetam dia iray amin'ireo fanampiana nootropic taloha kokoa avy amin'ny fianakaviana racetam. Io no fitambaran'ny racetam fahatelo taorian'ny piracetam sy aniracetam ary novolavolaina voalohany tamin'ny taona 1970. Oxiracetam dia fihenan'ny simika amin'ny racetam, piracetam. Toy ny racetams hafa, ny oxiracetam dia misy pyrrolidone ao anatin'ny fotony. Na izany aza, manana vondrona hydroxyl ny oxiracetam, ka izany no mahatonga azy ho mahery kokoa ...
9-Me-BC traikefa: zava-misy 7 momba ny 9-Me-BC tokony ho fantatrao
Septambra 11, 2020
Inona no atao hoe 9-ME-BC? 9-Me-BC (9-Methyl-β-carboline) fantatra koa amin'ny hoe 9-MBC dia fitambarana nootropic avy amin'ny vondrona β-carboline. Ny β-Carbolines dia avy amin'ny fianakaviana karbônina heterogenika. Midika izany fa izy ireo dia novokarina niaraka tamin'ny endogenous tao amin'ny vatan'olombelona ary koa exogenous amin'ny voankazo sasany, hena nandrahoina, setroka paraky sy kafe. Ny β-Carbolines (BCs) dia fantatra ho neurotoxic, na izany aza, vao tsy ela akory ...